खण्डकाव्य त्रयोदश विमोचित : RajdhaniDaily.com
Home कला खण्डकाव्य त्रयोदश विमोचित
खण्डकाव्य त्रयोदश विमोचित
काठमाडौं । शिखा बुक्सले ‘खण्डकाव्य त्रयोदश’ बजारमा ल्याएको छ । यस संग्रह शुक्रबार वाल्मीकि विद्यापीठमा लोकापर्ण गरिएको हो । गोपीकृष्ण शर्मा, प्रा. राजेन्द्र सुवेदी, भुवनहरि सिग्देल, ठाकुरशर्मा भण्डारी, श्रीहरि फुयाँल ‘सिरु’, प्रकाश चापागाईं, प्राडा जीवन अधिकारी, नारायणप्रसाद पोख्रेल, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. लेखप्रसाद निरौला, डा. देवी नेपाल, रमेश शुभेच्छु, नारायण निराशी १३ जना कविद्वारा यो पुस्तक लेखिएको हो ।
सबै कविको कवितामा मौलिक विषयवस्तु रहेको प्रमुख वक्ता महादेव अवस्थीले बताएका छन् । माधव पोख्रेल प्रमुख अथिति र राजेन्द्र सुवेदीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको कार्यक्रमलाई रमेश शुभेच्छुले सञ्चालन गरेका थिए ।
शिखा बुक्सका सञ्चालक पुष्पराव पौडेलले अन्त्यमा कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बजारमा पुस्तक पाइने र पुस्तकको मूल्य ५ सय ५० रुपैयाँ रहेको बताएका छन् ।
लोकतन्त्रमा दलहरू फुट्नु हुन्न
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका पर्याय हुन् । राजनीतिक दललाई आधुनिक राजनीतिको जीवनरेखा (लाइफलाइन) समेत मान्ने गरिएको छ । विशेषगरी सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने हरेक...
भर्खरै राजधानी समाचारदाता - May 2, 2021 0
एपीएफका ३६ खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण
खेल Kumar Raut - August 22, 2020 0
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का ३६ खेलाडीलाई कारोना संक्रमण देखिएको छ । सीमा क्षेत्रबाट फर्केका एपीएफका खेलाडीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको एपीएफले जनाएको...
खेल Dhruba Lamsal - February 23, 2020 0
पोखरा । नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) को आयोजनामा पोखरामा आइतबारदेखि एसियन टूर प्याराग्लाइडिङ वल्र्डकप प्रतियोगिता शुरु भएको छ । नेपाल प्याराग्लाइडिङ...
प्रदेश Dhruba Lamsal - March 30, 2020 0
जनकपुरधाम । उदयपुर र पर्सामा भारतबाट फर्किएका जमातीहरुमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि सचेतना स्वरुप जनकपुरको एक मस्जिदमा रहेका भारतीयहरुको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरिएको छ । कोभिड–१९...